SomaliTalk.com » 2012 » June » 18
Home » Archive Maalinta June 18th, 2012
Howraarsankii Hanti-wadaagga iyo Hammigii Hanti-goosadka Halkee bay ku dambeeyeen?
ALLAH ayaa Xummaan oo dhan ka nasahan,waxaana ku Sallinayaa RASUULKA (CSW).Intaa kadib akhriste Maqaalkaan waxan ku eegaya haddu Rabbi idmo Taariikhdii Dal iyo Dad ay soo martay Ummadan aynu ku abtirsanno ee Soomaaliyeed, gaar ahaan heerarkii Ganacsi ee ay soo mareen,waqtigii Dowlad li’ida nahaysay ilaa markaan yeelanayba, anigoo ku sheegi doona waa sidaan aaminsanahaye sababta dhabta ah...
Midnimo ayaan magac ku leenahay
Midnimada waa haybad aan la hormari karin, waa quwad aan la loodin karin, waa magac aan muran la galin karin oo aan marna la qaybin karin, waa jiritaan aan laga jeedin karin jihada uu rabo, waa sharaf aan shaki lakalin karin. Midnimadu waxay tahay macanaheeda “xoog, xoolo iyo xikmad” waxaan haysano inay mid yihiin si aan umaarayno dhamaan waxii dhib ah oo inasoo wajaha gudaha iyo...
AL-Akhwaanul Muslimiin Horudhac: waxaa laga joogga 84 sano markii Shiikh xasan Al-bannaa uu ku aasaasay xarakada AL-Akhwaanul Muslimiin 1928, magaallada AL-ismaaciiliyah . waxay jamaacadu soo martay marxalado fara badan oo intooda badan loo adeegsaday Dilitaan, xiritaan,jir dil ,musaafirin iwm. waxaa ugu horeeyey oo feb,11,1949 la dilay shiikh xasan Al-bana,waxaa ku xigay oo...
Soomaaliya Uma hogaansameyso Siyaasada Ethiopia ee Ku Dhisan Xooga Milatari
Soomaliya waa dal aan lahyn dowlad Rasmiya taasna waxey keentay in wadamada deriska ay xoog ciidan ku soo farageliyaan arrimaha gudaha Soomaaliya. Ujeedada faragelintoodu waa mid ku dhisan iney hogaanka siyaasada Soomaaliya taladeedu ka timaado Addis Sababa ama Nairobi. Waxaa muuqata in isku daygaas ay u rukuuceen madax goboleedyo iyo kuwa ka tirsan dowlada dhexe. Shacab weynaha Soomaaliyeed marna...
C/weli Gaas “khilaafaadka la isku heysto oo ah Odayaasha sax ma ahan…”
Ra’iisul Wasaaraha DFKMG ”Haddii aad Tihiin Odoyaasha Dhaqanka Masiirkii Ummada ayaa Gacantiina ku jira, Waqtiga waa Ciriiri ee Dedejiya Ansaxinta Dasuurka” Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaaz oo ah Ra’iisul Wasaaraha dawladda federaalka KMG Soomaaliya ayaa manta la kulmay odoyaash Dhaqanka ee uu shirku uga soconayo Magaalada Muqdisho. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ugu horeynba war bixino ka dhagaystay...
Xildhibaan Suleymaan oo sheegay in Shiikh Shariif uusan laali Karin Qodobo ka mid ah Axdiga
Iyadoo maalinimadii shalay Wareegto uu soo saaray Madaxweynaha dawladda ku meel Gaarka SoomaaliyaM Shiikhj Shariif Shiikh Axmed uu ku Laalay qaar ka mid ah Qodobada Axdiga ku meel gaarka ayaa waxaa arrintaa ka hadlay Xildhibaano ka tirsan Barlamanka ku meel Gaarka Soomaaliya. Xildhibaan Suleymaan Maxamed oo ka mid ah Xildhibaanada Barlamanka ku meel gaarka Soomaaliya ayaa sheegey in Madaxweyne...